पुरुषलाई छिटै आकर्षित गर्न सक्छन् यी ४ राशि भएका महिला !! | सुदुरपश्चिम खबर
हरेक व्यक्तिको इच्छा हुन्छ कि आफ्नो गुणबाट अरु मानिस आफूप्रति आर्कषित हुन्। ज्योतिषशास्त्र अनुसार केही राशीका युवतिहरुमा अरुलाई सहजै आर्कषित गर्न सक्ने शक्ति हुन्छ। यी ४ राशिका युवतीले पुरुषलाई सहजै आकर्षित गर्न सक्छन्‘.
वृष : राशि वृष राशि भएका युवतीहरुमा आफू सुदर नभएपनि पुरुषको मन आफूतिर आर्कषित गर्ने थुप्रै गुण हुन्छन्। सुन्दर स्वरूप र असल आचरण भएका यी युवतीको अगाडी कुनै पनि पुरुष आकर्षित हुन्छ। यस राशिका महिला प्रति कुनै पनि पुरुष यसरी आकर्षित हुन्छ कि उनीहरु यी महिलाको हरेक कुरा मान्न तयार हुन्छन्।
मिथुन : राशि मिथुन राशिका युवतीहरु निकै आकर्षक स्वभावका हुन्छन् जसको कारणले पुरुष यस राशिका महिला प्रति छिटै आर्कषित हुन्छन्। सुन्दरताले मात्र नभएर यी महिलाको स्वभाव तथा बानी–व्यवहारले पनि मानिस यिनीहरु प्रति आकर्षित हुन् गर्छन्।
वृश्चिक : राशि वृश्चिक राशि भएका युवतीहरुमा पनि पुरुषलाई आफू प्रति आर्कषित गर्ने गुण हुन्छ। यी राशिका महिला कुनै पनि ठाउँमा आफ्नो प्रभाव छाड्न निकै माहिर हुन्छन्। यी युवतीहरुमा आफ्नो बोलीबाट अरुलाई प्रभाव पार्न सक्ने क्षमता हुन्छ।
मीनः राशि मीन राशि भएका युवतीहरु प्रति प्रायः पुरुषहरु छिट्टै आकर्षित हुन्छन्। यस राशिका महिलाको रोमान्टिक स्वभावले पुरुषलाई छिटो आर्कषित गर्छ। मीन राशिका युवतीहरु सुन्दर हुनुका साथै मिलनसार स्वभाव र मधुर बोलीले जो कोहि पनि यिनीहरु प्रति आकर्षित हुन्छन्। (gnewsnepal.com बाट सभार)